Erin Gavin: Ku caawinta Barteyaalka Af Ingiriisiga Barashada Afka ah
Sawir sawir ah ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis.
Halkaan Barnaamijka "Pathway Schools", McKnight waxa ay wadaagaan todobo dugsi oo ku yaal Twin Cities - iyo sidoo kale Jaamacadda Chicago Machadka Waxbarashada Magaalooyinka - In la isku dheelitiro lana hagaajiyo tayada barashada akhris / qorida ee fasalka PreK-3. Barashada Luqadda Labaad (DLLs) waxay ku dhawaad seddex meelood laba meel ka mid ah ardayda ku jirta Dugsiyadeena Pathway - oo ku yaal Minneapolis iyo St. Paul, DLLs waxay matalaan qiyaas ahaan saddex meelood meel dhammaan ardayda waxayna yihiin kuwa ugu sareeya ee dadweynaha ku nool Minnesota. Waxaan u aragnaa ardaydaas laba-luqadoodlaha ah inay yihiin maaliyad muhiim u ah Minnesota - xoojinta kala duwanaanshaha dhaqankeena iyo hagaajinta tartanka dhaqaalaha adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, rabitaanadan waxaa lagu ogaan doonaa oo kaliya haddii DLLs helaan taageerooyin waxbarasho oo tayo leh. Sanadka 2014, 64 boqolkiiba oo ka mid ah bartayaasha luuqada ee Minnesota waxay ka qalin-jabiyeen dugsiga sare waqtigoodii - marka la barbar dhigo boqolkiiba 76 ardayda idil. Kaliya 24 boqolkiiba ardayda fasalka seddexaad ee Minnesota waxay si wanaagsan u akhrinayaan - maadi ah in cilmi-baaristu muujiso inay aad u saadaalinayso guusha waxbarasho ee mustaqbalka.
Wada-hawlgaladayada Pathways Schools waxay xiiseynayaan inay siiyaan waxbarasho wanaagsan oo loogu talagalay ardayda DLL-da, laakiin helitaanka cilmi-baarista, siyaasadda, iyo ficil ahaanta badanaa waxay ka danbeeyaan xaqiiqada fasallada. Sanadihii ugu danbeeyay, McKnight waxa uu maalgashaday dadaal badan oo lagu ururiyo, fahamka, iyo la wadaago macluumaadka ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loogu adeego fasalada Minnesota. Bishii Oktoobar 2014, waxan wada shaqeynay Foundation-Simons Foundation iyo Jaamacadda Arizona si ay u maal-galiso shir-labo maalmood oo diirada lagu saarayo tarjumidda cilmi-baarista waxqabadka waxqabadka DLLs. Iyada oo qayb ka mid ah kulanku, waxaannu bilawnay waraaqo si loo bixiyo talooyin ku saleysan caddaynta hagaajinta wax barista, qiimeynta, iyo hoggaaminta dugsiga iyada oo la adeegsanayo adeegyo tiro badan oo ah DLLs.
Waxaan sidoo kale waydiinay culimada in ay soo jeediyaan qorshe horumarineed oo loola jeedo kor u qaadida guulaha DLL iyo in lagu soo jeediyo istaraatiijiyado lagu hagaajinayo dhuumaha caasimadda - hubinta in aan diyaarinno, qorno, iyo hayno macalimiin ka shaqayn kara oo taageera DLLs.
Waan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in shan waraaqood oo hadda la heli karo Bogga McKnight, waxaana rajeyneynaa in barayaasha, hoggaamiyeyaasha nidaamka, iyo siyaasad-dejiyeyaasha ay u adeegsan doonaan inay hagaan qorsheyntooda iyo go'aan qaadashadooda. Talooyinka dhammaan shanta waraaq ayaa la isku darayaa lana sii balaariyay "Ku caawinta Barteyaalka Af Ingiriisiga Labaad ee Horumarinta: Abaabulka Agenda for Action, "Sidoo kale waxaa laga heli karaa bogga intarnetka.
Maaddaama McKnight iyo la-hawlgalayaasheeda ay u shaqeeyaan si ay u xaqiijiyaan in Minnesota ay kobciso hanti ugu weyn - Bartayaaladayada Afka ah, waxaan sii wadi doonaa inaan la wadaagno waxa aan ogaanno si ay asxaabteena ugu adeegaan danaha waxbarashada, u doodista, iyo dhaqanka ay tarjumaan fikradaha.